खेलकुदलाई विकास र सम्बृद्धिसँग जोडेर लैजानुपर्छ : अध्यक्ष बल
रुपक कालिराज आइतबार​, फागुन ११ २०७६
हेटौंडाबाट करिब ४५ किमी पूर्व मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा पर्ने खेलकुद विकास समितिले तेस्रो संस्करणको बागमती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता जारी राखेको छ । निकै मेहनतसाथ थालिएको प्रतियोगिताको यस संस्करण अन्तिम चरणमा छ । यस सन्दर्भमा गोल्डकप आयोजक खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अरुण बलसँग गोल्डकप र गाउँको खेलक्षेत्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानी ................
गोल्डकप आयोजनाको मुख्य उद्धेश्य के हो ?
खेलकुदको माध्यमबाट युवाहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद को नारा बोकेको नेपाली खेलकुद मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठाका साथै जीविकोपार्जन र जीवननिर्वाहको माध्यम पनि बन्दै गएको छ ।
गाउँपालिकामा सुरुका दिनहरुमा धेरै चुनौती सामना गर्नु परे पनि जतिखेर खेलमैदान थिएनन्, खेलमैदान अभावले खेलाडी पनि थिएनन् । हामीले बाहिरबाट खेलाडी झिकाएर पनि खेल सञ्चालन गर्नुप¥यो । विस्तार खेलकुदलाई व्यबस्थापन गर्दै जाने क्रममा युवालाई सही मार्गमा डोे¥याउन सफल भयौं । तेस्रो गोल्डकपसम्म आइरहँदा बाहिरी खेलाडी समावेश नगरी स्थानीय खेलाडीलाई प्राथमिकता दियौं ।
गाउँपालिकाका केही युवा संगतका कारण दुव्र्यसनतर्फ आकर्षण भएको हो कि भन्ने आभाष भएकोले त्यस्ता शंकाको घेरामा परेका युवालाई खेलकुद क्षेत्रमा समावेश गराउँदै सामाजिक हितका कार्यमा हिँडाउन सफल भएका छौं । गाउँपालिकाको परिचय दिलाउने उद्धेश्यसाथ स्थानीयदेखि राष्ट्रियसम्मका खेल आयोजना गर्दै आएका छौं ।
फुटबलबाट गाउँले के पाउनेछ ?
ससाना प्रतियोगिता गर्दै त्यस प्रतियोगिताबाट सिक्दै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सफल भएका छौं । र, सदरमुकाम केन्द्रित गोल्डकपलाई गाउँसम्म ल्याउन सफल भएका छौं । चुनौती सामाना गर्दै तेस्रो गोल्डकप गर्न सफल भएका छौं । स्थानीय युवा खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलाडी बनाउने उद्धेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
खेलकुदका लागि गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजनसहित प्रत्येक वडामा खेलमैदान निर्माण भइरहँदा राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादनमा टेवा पुग्नेछ । खेलकुदमा धेरै अवसर छन् । ती अवसरलाई सदुपयोग गर्न नयाँ प्रतिभा खोजी गर्ने कार्य थालनी गर्दैछौं । यसमा पालिकाले निकै सहयोग गरेको छ । गोल्डकपले जग बसालेको छ । दीर्घकालिन योजनाअनुसार बागमती खेलकुद विकास समिति अगाडि बढिरहेको छ । प्रतियोगिताका लागि गाउँपालिकाले ३० लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ ।
प्रतियोगिता कहिले समापन हुनेछ ?
बागमती गाउँपालिकाको जनता मावि प्राविधिक शिक्षालयको खेलमैदानमा जारी तेस्रो बागमती गोल्डकपको समापन आज (फागुन ११ गते) हुनेछ । फागुन १२ गते गर्ने भनिएको फाइनल प्रतियोगिता कारणवश एक दिनअगाडि सारिएको छ ।
प्रतियोगितामा कति टिम सहभागी छन् ?
प्रतियोगिता फागुन ३ गतेदेखि शुरु भएको हो । प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजनका ५ वटा र मोफसलका ५ वटा गरी १० वटा टिमको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजनका जावलाखेल युथ क्लब, संकटा क्लब, हिमालयन शेर्पा, च्यासल युथ क्लब र साबिक विजेता सरस्वती युवा क्लब छन् । मोफसलका न्यु डाँफे, सिमराको नव जनजागृति, सर्लाहीको बागमती युवा क्लब, बीरगञ्ज युनाइटेड र आयोजक टिम प्रतिस्पर्धामा छन् । बागमती खेलकुद विकास समितिको आयोजना र बागमती गाउँपालिका मकवानपुरकोे प्रायोजनमा प्रतियोगितामा भएको हो ।
गोल्डकपमा दर्शक र प्रतियोगीले केकस्तो सुबिधा पाउनेछन् ?
गोल्डकपमा एकसाथ प्यारापिट र खुला स्थानमा बसेर ७ हजार दर्शकले खेल हेर्न सक्नेछन् । गोेल्डकपको विजेताले ६ लाख नगद, शिल्ड र मेडल पाउनेछन् । उपविजेताले ३ लाख हात पार्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार नगद पाउनेछन् । उत्कृष्ट गोलरक्षक, फरवार्ड, मिडफिल्डर, डिफेन्डर र प्रशिक्षकले जनही १० हजार प्राप्त गर्नेछन् । प्रत्येक खेलका म्यान अफ दी म्याच हुने खेलाडीले ५ हजार नगद पाउनेछन् ।
गोल्डकपका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई फापरबारी(७ का राजनीतिकर्मी÷समाजसेवी टेकबहादुर डिम्डुङले ५० हजार दिने घोषणा गर्नुभएको छ । डिम्डुङ, नेकपा बागमती गाउँपालिका सदस्य हुनुहुन्छ ।
उहाँले खेलक्षेत्रका लागि सदैंव सहयोग गर्ने भन्दै गोल्डकपअन्तर्गत् सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरिएको ५० हजार आफूले उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ । उहाँले खेलक्षेत्रले समाज परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो ।
भौगोलिक हिसाब गाउँपालिका राजधानीबाट नजिक भए पनि सुबिधाको हिसाबले पछि रहेको छ । उहाँले लुकेका प्रतिभा उजागर गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु खुशीको कुरा हो ।
खेलकुदलाई विकास र सम्बृद्धिसँग जोडेर लैजानुपर्छ । यो काम बागमती गाउँपालिकाले गरेको छ । नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा मकवानपुरको योगदान ठूलो रहेको छ । यसलाई निरन्तरताका लागि म आग्रह गर्दछु । यहाँका खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गर्न सकेका छन् । मकवानपुरका खेलाडीले खेलको माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाएका छन् । मकवानपुरका खेलाडीले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सक्दा खेलक्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ ।
स्वस्थ्य नागरिकबाट मात्र देश सम्बृद्धि हुनेछ । यसमा खेलकुदको योगदान रहन्छ । खेलकुद विकास भएको देशमा नागरिक स्वस्थ्य हुने भएकोले नेपालले पनि खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्छ ।